Boqor Cismaan Buur-madow oo xabsiga loo taxaabay -DHEGAYSO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Boqor Cismaan Buur-madow oo xabsiga loo taxaabay -DHEGAYSO
Waxaa fiidnimadii caawa oo Khamiis ah Booliska Somaliland ee magalada Hargeysa qabteen Boqor Cismaan Aw-Maxamuud Buur-madow, isaga oo ku sugan mid kamid ah Hoteelada Hargeysa.
Afhayeenka ciidanka Booliska Somaliland Col. Faysal Xiis Cilmi ayaa saxaafadda u sheegay in la xiray Boqorka, sababta loo xiray ay tahay in uu sameeyey Qaran dumis iyo faafinta warar been abuur ah, Xiis ayaa sheegay in Buur Madow ku eedeysan yahay qodobada 212 iyo qodobka 328 ee xeerka ciqaabta.
Afhayeenka ciidanka Booliska Somaliland ayaa sheegay in Boqor Buur-madow uu Puntland uga dhawaaqey Qaran dumin, halkaasna ku tegey safar aanu fasax u haysan.
Sababta lala xiriirinaayo xariga Boqor Buur-madow ayaa ah in uu degmada Carmo ee Gobolka Bari kaga qaybgalay caano-shubka Beeldaaje Maxamed Ismaaciil, isla markaana xafladdii ka soo jeediyey baaq ah in Somaliland o Puntand ay ciidamada Tukaraq kala qaadaan.
Boqor Buurmadow ayaa waxaa horey u xirey labadii Madaxweyne ee ka horeeyey Muuse Biixi ee Rayaale iyo Siilaanyo.
Somaliland ayaa xabsiyadeeda waxaa ku jira dad u xiran fikirka ay aaminsan yihin keliya iyo in ay cabireen ra’yigooda, waxana lagu eedeynayaa in ay cabburintu marayso meeshii ugu xumeyd, sida uu maanta ku dhawaaqey guddoomiyaha xisbiga waddani ee Cabdiraxmaan Cirro.